FAHATONGAVAN’I SAMUEL ETO’O ETO MADAGASIKARA – Ministère de la jeunesse et des sports
FAHATONGAVAN’I SAMUEL ETO’O ETO MADAGASIKARA
2 septembre 2021 Com Com Non classé 0
Anio 01 septambra 2021 no nigadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ilay kitan’ny Baolina kitra kameroniana fanta-daza maneran-tany tao amin’ny klioba FC Barcelone sy Lions Indomptables Samuel Eto’o izay ny Filoham-pirenena no nanasa manokana azy ho avy aty Madagasikara.
Tonga nitsena azy teny ny Sekretera Jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny solonten’Andriamatoa Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahan-tena, ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena sy ny Mpandrindra Jeneraly misahana ny Tetikasa .
Ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Ramatoa Rosa RAKOTOZAFY no nanolotra ny teny fiarahabana an’ Andriamatoa Samuel Eto’o noho izao fahatongavany hanotrona ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny kianja Barea izao sy hanatrika ny lalao ihaonan’i Madagasikara sy Bénin rahampitso. Naneho fisaorana ho an’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblika ihany koa ny tenany tamin’ny fanatanterahana ny velirano faha 13 izay manandratra avo dia avo ny Fanatanjahantena, anisan’izany ny fananganana fotodrafitrasa Kianja Barea izay hotokanana amin’ny 04 septambra ho avy izao. Taorian’izay dia naneho ny hafaliam-pony Andriamatoa Samuel Eto’o ary nisaotra sy nankasitraka an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika izay nanolotra ny fanasana hanatrika ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny kianja Barea sy ny lalao hiaonan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny écureuil Bénin. Ny fahatongavako eto hoy izy dia efa midika ho fahavononana ny hanohana ny Barea. Firarian-tsoa ho an’ny ekipam-pirenena Malagasy no netiny namaranana ny valandresaka.
Vers une reforme de la Gouvernance sportive
FANOKAFANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY “PROJET TANORA”